Zidane oo ka hadlay dib u dhaca ku yimid qabsoomida kulanka El Clasico – Gool FM
(Madrid) 18 Okt 2019. Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa xaqiijiyay in isaga iyo ciyaartoydiisa ay diirada saari doonaan ciyaarta ay habeen dambe Sabtida ah ku wajihi doonaan naadiga Mallorca kulankooda 9-aad ee horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan.
Dhinaca kale Zinedine Zidane ayaa wuxuu ka hadlay dib u dhigista kulanka El Clasico, wuxuuna sheegay in haddii xitaa kulankan la ciyaari lahaa waqtigii horey loogu qorsheeyay ee ah 26-ka bishan Oktoobar uu diyaar u noqon lahaa inuu ciyaaro.
Zidane ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Marca” ee dalka Spain wuuxu ku sheegay:
“Waxaan u maleynayaa in kulanka berri uu yahay kan iigu muhiimsan anniga ahaan, waana ognahay waxa dhacay labadan toddobaad, laakiin diyaar ayaa nahay waxaana dooneynaa inaan soo bandhigno ciyaar aad u fiican kulanka aan la ciyaari doono kooxda Mallorca”.
“Waxaan sameyn doonaa waxa ay saraakiishu yiraahdaan, haddii ay tahay inaan ciyaarno 26-ka Oktoobar, waan ciyaari doonaa, haddii isbedel uu jiro, waxaan ku ciyaari doonaa sida uu jadwalku yahay”.
“Waan ogahay inay jiraan doodo badan, anniga macalin ahaan waa inaan diyaar u ahaado waqtiga loo qorsheeyay in la ciyaaro”.